eNasha.com - निर्देशक हराएको सूचना
नेपाली चलचित्रले हाम्रै भुइँमा पनि चार दशक लामो यात्रा तय गरिसक्यो । तर यतिको लामो यात्रा तय गर्दा पनि नेपाली चलचित्रले आफ्नो पृथक् पहिचान भने बनाउन सकेको छैन । चलचित्रको बुनोट, बनोट र प्रस्तुतिले बन्ने भाषा नबनेसम्म हामी नेपाली चलचित्रलाई विश्व मानचित्रमा पृथक् पहिचानका साथ आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सक्ने स्थितिमा हुन्नौँ । अपवाददाई छाडेर अहिले हामीसँग भारतीय चलचित्रको भाषामा बनिरहेका चलचित्रहरु मात्र छन्, अपवादहरु पनि भारतीय चलचित्रको छायाँबाट पूर्णतः मुक्त छैनन् ।
चलचित्र निर्देशकको अभिव्यक्तिको माध्यम हो । जसरी एउटा कविले कुनै पनि विषयवस्तुलाई कविताम प्रस्तुत गर्छ, त्यसरी नै निर्देशकले कुनै पनि विषयवस्तुलाई चलचित्रको माध्यमबाट आफ्नो अभिव्यक्ति दिन्छ । यसरी हेर्दा एउटा कविका लागि कविता र एउटा निर्देशकका लागि चलचित्रले उही मानक र अर्थ राख्छ । फरक यत्ति हो, अक्षरको औजार चलाएर कविले कविता सिर्जना गर्छ भने चलचित्र निर्देशकले चरित्रहरु उभ्याएर तिनै चरित्रहरु मार्फत् आफ्नो अभिव्यक्ति दिनुपर्ने हुन्छ । कविका लागि कलम र कागज जे माने राख्छन्, निर्देशकका लागि क्यामेरा र फर्म्याटले त्यही माने राख्छन् । यसरी हेर्दा, हामी सहज रुपमा एउटा निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ, चलचित्र निर्देशककै अभिव्यक्तिको माध्यम हो ।
तर, नेपाली चलचित्रको सर्न्दर्भमा चलचित्र निर्देशकको माध्यम हुन सकेको छ त ? भन्नलाई त भन्नैपर्छ, तर अपवादलाई छाडेर त्यसो हुन सकेको छैन । कारण पहिलो त हाम्रो चलचित्रको सूत्र नै यस्तो छ, जहाँ पाँच वटा गीतका लागि नृत्य निर्देशक र पाँच वटा फाइटका लागि द्वन्द्व निर्देशकको भर्ती गरिन्छ र उनीहरुलाई चलचित्रका मोडहरुको अभिभारा बोकाएर निर्देशक आफूलाई हलुका महसूस गर्छ । यो त सहमतिको अभिभारा भयो, यसबाहेक अन्य विभागहरुको जिम्मेवारी पनि नेपाली चलचित्रका निर्देशकहरु सहजै लिन हिच्किचाउँछन् । जस्तो कि, अहिले पनि चलचित्रको असफलताको मूल कारण पटकथा नै हो भनेर पटकथाकारलाई सबै दोष बोकाउने गरिन्छ । दृश्य राम्रो भएन भने क्यामेराम्यान नै छैनन् भन्यो, दोष उतै पन्छायो । दृश्य र ध्वनिको मिश्रण राम्रो भएन भने सम्पादकलाई दोष बोकायो अनि चलचित्रको स्तरका लागि फर्म्याट र बजेटलाई । चलचित्रका विभिन्न विभागका प्राविधिकहरुलाई असफलताको दोष बोकाएर निर्देशकहरु यहाँ चोखिने यत्न गर्छन् । वास्तवमा यो एउटा गम्भीर अपराध हो ।
समस्या कहाँ छ त ? समस्या हामी आफैँमा छ । त्यो के भने हामीसँग नेपाली चलचित्रलाई पृथक् मानकमा उभ्याउने क्षमता भएका निर्देशक नै छैनन् । भन्दा र सुन्दा अप्रिय लाग्ला, हामीसँग पढेका कम र परेका धेरै निर्देशक छन् । परेकाहरुका गुरुबाबुहरु पनि परेका नै छन् । अहिले नेपाली चलचित्र तेस्रो पुस्तासम्म परेका निर्देशकहरुको भरमा चलेको छ । निर्देशन आफैँमा विज्ञानमा आधारित एउटा सिद्धान्त हो । त्यसैले भौतिक विज्ञान विषय लिएर दुइ वर्ष उच्च शिक्षा लिएका विद्यार्थीहरु मात्र यो विषय पढ्न योग्य मानिन्छन् । तर हामीसँग कक्षा १० को विज्ञान पनि गाह्रो मान्दै एसएलसी पास गरेका र त्योभन्दा माथिको शिक्षामा विज्ञानको मुख पनि नदेखेका निर्देशकहरुको बाहुल्यता छ । यस्तो स्थितिमा हामीलाई चलचित्र निर्देशकहरुको माध्यम हो भनेर ढुक्कसँग भन्न गाह्रो हुन्छ । यो त परेका निर्देशकहरुको कुरा भयो, पढेका निर्देशकहरुको कुरा पनि योभन्दा खासै भिन्दै छैन । पहिला त हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त फिल्म इन्स्टिच्यूटबाट स्नातक गरेर आएका निर्देशकहरु हातको औँलामा गन्न सकिन्छन्, त्यसमा पनि लक्ष्मीनाथ शर्मालाई छोडेर अरु कोही पनि चलचित्र क्षेत्रमै छैनन् । अर्को कुरा चलचित्र प्रविधि र प्रस्तुति दुवै हिसाबले अत्यन्त गतिशील विज्ञान हो, तर हामीसँग पढेका निर्देशकहरु पनि ८० को दशकभन्दा पछिका छैनन् । तर, त्यसपछि चलचित्रको प्रविधि र प्रस्तुति भने आकाश-जमिनको फरक आइसक्यो । यसरी हेर्दा हामीसँग पढेका निर्देशकहरु छन्, भन्नु पनि छैनन् भन्नु बराबरै छ ।
चलचित्रमा के चल्छ र को चल्छ भन्नु पनि गाह्रो छ । चलेका निर्देशकहरु तुलसी घिमिरे, शिव रेग्मी र दयाराम दाहाल पनि पछिल्लो समय चलेका छैनन् । नारायण पुरी औसत र त्यो भन्दा माथि रहेर टिकेका छन् । दीपक श्रेष्ठ अहिले पनि चल्ने परीक्षा दिइरहेकै अवस्थामा छन् । धड्कन चले पनि निर्देशक नरेश पौड्यालले आफूलाई अब्बल दर्जाको निर्देशक पुष्टी गर्न अझै अर्को एउटा चल्ने चलचित्र दिनु पर्छ । पछिल्लो समय निखिल र रेखाले इनिसियल स्र्टार्ट दिने गरेका छन् भने त्यसपछि त गिमिकै चलेको छ । पापी मान्छेमा जनावर, हिम्मतमा बञ्जी जम्प, धड्कनमा वसन्त श्रेष्ठको उत्तर आधुनिक कोरियोग्राफी, चलेका यिनै हुन् । यसरी हेर्दा निर्देशकभन्दा पनि गिमिक चल्ने भएको छ । गिमिक चलेको भरमा निर्देशक चले भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि अलि हतार नै हुन्छ ।
भनिदैछ, नेपाली चलचित्रको पछिल्लो व्यापारिक तश्वीर सुन्दर छैन । द्वन्द्वका कारण नै यसो भएको हो । पहिलो भनाइ ठीक भए पनि दोस्रो भनाइ पूरापूर ठीक होइन । द्वन्द्वले चलचित्र व्यापारलाई प्रभावित गरेको छ तर त्यही मात्र कारण नेपाली चलचित्रको यो स्थिति बनाउन पर्याप्त होइन । मूलकारण चलचित्रकर्मी आफैँ हुन् । त्यसमा पनि चलचित्र निर्देशकको माध्यम भएको हुँदा यसको सर्वथा दोष नेपाली चलचित्र निर्देशकले नै लिनु पर्छ । जसरी सफल भएको भएर त्यसको श्रेय निर्देशकलाई नै जान्थ्यो ।
चलचित्र उद्योगको समृद्धि दुइ अवस्थामा हुन्छ । पहिलो व्यापार नभए पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरका चलचित्र निर्माण गरी तिनीहरुमार्फत् चलचित्रको आफ्न पृथक् भाषा बनाएर अनि दोस्रो चाहिँ व्यापारिक सफलताबाट । हामीसँग दुवै अवस्था छैन । हामी दोस्रो अवस्थाका लागि नै चिन्तित छौँ तर यसले चलचित्रकर्मीहरुलाई व्यक्तिगत रुपमा भौतिक समृद्धि मात्र दिन्छ, समग्रमा चलचित्र उद्योगको छवि दिन सक्तैन । ल मानौँ, सबै चलचित्र अहिले कै जनशक्ति, तौरतरिका र प्रस्तुतिले चले रे, त्यसबाट के हुन्छ ? पहिलो, यस सफलताले व्यापार हुन्छ । यस्तै चलचित्रले पैसा दिइरहन्छ भने कसले के का लागि अर्को विकल्प खोजिरहन्छ ? दोस्रो यसले नेपाली चलचित्रको आफ्नै भाषा र पहिचानको बाटो रोक्छ । यर्सथ हामीले अहिले व्यापारिक सफलतासँगै नेपाली चलचित्रको पहिचानको पनि खोजी गर्नुपर्ने भएको छ । पहिचानसहितको व्यापारले मात्र उद्योगलाई समृद्ध बनाउने हो ।
मुलुक अहिले एकदशकभन्दा लामो समयको द्वन्द्वबाट मुक्ति पाउने बाटोतिर अग्रसर छ । मुलुकका सबै क्षेत्रलाइ झैँ नेपाली चलचित्रलाई पनि यसले चुनौति र अवसर दुवै अवसर प्रदान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सिनेकर्मीहरुले पनि आफ्नो सोच र कोणमा केही फरक नल्याई सुखै छैन । तर यसको अर्थ सिनेकर्मीहरुले न रातारात आफ्नो कोइली रुपलाई बदलेर मयूर हुनुपर्छ भन्ने हो न परिवर्तनलाई आत्मसात नगरी उल्टो गंगा बगाइरहनु पर्छ भन्ने नै हो । तर दुर्भाग्य अहिले पनि नेपाली चलचित्रले परिवर्तनको रुप पक्षलाई मात्र बुझिरहेजस्तो देखिन्छ । जबसम सार पक्षलाई बुझिदैन, तबसम्म यो बुझाई एकांकी हुन्छ । पछिल्लो समय नेपाली चलचित्रका विषयका हिसाबले बढी आन्दोलनमय भएबाट पनि त्यही पुष्टी हुन्छ ।
नेपाली चलचित्रको भविष्य अहिलेकै चालु तौरतरिका र ढर्राबाट सुनिश्चित गर्न सम्भव छैन । यही स्थिति जारी रहे, हामी मुलुकभित्र त सकिन्छौँ नै, मुलुकबाहिर पनि नेपाली वृत्तचित्रले सेल्युल्वाइड चलचित्रलाई प्रतिस्थापन गरिदिँदा त्यहाँ पनि ठाउँ बाँकी रहँदैन । केही समययता नेपाली वृत्तचित्रमा आएको बहारले आफ्नो भाषा बनाउने स्थिति आइसक्यो र अहिले अन्तर्रराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाली चलचित्र भनेको वृत्तचित्र या डकुड्रामा भन्ने भान नै परिसक्यो । नेपाली डायस्पोरामा गएर हाम्रा चलचित्र देखाएर हामीले हाम्रो चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो भन्नु मूतको न्यानो मात्रै हो । त्यसरी नेपाली चलचित्रको विश्व बजार र छवि बन्दैन ।
अब प्रश्न उठ्छ, यस्तो अवस्था कसले चिर्ने त ? त्यसका लागि मूलतः निर्देशकहरुले नै पहल गर्नुपर्छ । किन कि चलचित्र अन्ततः निर्देशकै माध्यम हो । मुम्बइया डीभीडीलाई टेक्स्टबुक बनाउँदा त्यसले नेपाली भाषामा भारतीय चलचित्रकै संख्या मात्र बढाउने होइन कि नेपाली चलचित्रको पृथक् पहिचानको बाटो पनि अवरुद्ध हुन्छ ।
नेपाली चलचित्र निर्देशकहरुको चाहना र कर्तव्य के हो ? चलचित्र उत्पादन मात्रै हो या आफ्नोपनको चलचित्र निर्माण पनि हो ? चलचित्र व्यापार मात्रै हो या नेपाली चलचित्रको पृथक पहिचानको निर्माण पनि हो ? मुलुक परिवर्तनको संघारमा उभिएको यतिबेला नेपाली चलचित्र निर्देशकहरुले आफूले आफैँलाई प्रश्न गर्दै उत्तर खोज्नुपर्छ । होइन भने निर्देशकहरुले आफैँ हराएको सूचना जारी गरे हुन्छ अर्थात् नेपाली चलचित्र निर्देशक हराएको सूचना !
(चलचित्र निर्देशक समीक्षक समाजका अध्यक्ष डा. भट्टराई अन्तर्रराष्ट्रिय चलचित्र समीक्षक समाज र न्यूयोर्क चलचित्र समीक्षक समाजका सदस्य पनि हुनुहुन्छ । यो लेख नेपाली चलचित्र निर्देशक समाजको चौथो साधारण सभा २०६३ मंसीर २२ का बेला प्रकाशित स्मारिकामा पहिलो पटक प्रकाशित भएको थियो । समय सान्दर्भिक ठानी यसलाई पुनः प्रकाशित गरिएको छ ।)